🥇 ▷ World War Z wuxuu helayaa cusboonaysiinta 'Proving Grounds' wuxuuna soo bandhigayaa xilli labaad ✅
World War Z wuxuu helayaa cusboonaysiinta ‘Proving Grounds’ wuxuuna soo bandhigayaa xilli labaad
Mid ka mid ah cayaaraha iskaashi ee xiisaha leh ee laga heli karo Xbox One waa Sabre Interactive game, World War Z. Tallaabada ficil ahaan ee soojeedintani waa mid lagu cusbooneysiinayo waxyaabaha cusub si loo helo khibrad firfircoon si loo sii wado raaxeysiga waqti dheer. Isbuucaan Dagaalkii aduunka z ayaa helay cusboonaysiinta la baabtiisay sida Tijaabinta Saldhigyada, kaas oo dhammaanaya xilli-ciyaareedkii ugu horreeyay, laakiin sidoo kale, faahfaahinta ugu horreysa ee waxa iman doona kan labaad ayaa la siidaayay.
Waxa ugu horreeya waa in la xaadiro wixii ku soo kordha Dagaalkii Adduunka Z, iyadoo la cusbooneysiinayo Caddaynta Waxyaabaha ku daraya waxyaabaha cusub, sida Qalabka loo yaqaan ‘Challenge Mode’, hubka iyo waxyaabaha la isku qurxiyo.
Sida aad arki karto, taasi Habka Loolanka Waxay noqoneysaa qaab tartan toddobaadle ah oo ay kujirto ka mid ahaanshaha is-badallada. Kuwani waa qawaaniin taxane ah oo wax ka beddelaya habka caadiga ah ee cayaaraha. Toddobaad kasta liistada ciyaarta ayaa lagu soo bandhigayaa martigelinta cayaaraha oo ay ku jiraan saddex qaab-dejiyeyaal, marka waa inaad isku daydaa inaad ka adkaato loolanka adoo noqda hal abuur dheeraad ah. Intaas waxaa sii dheer, ka guuleysiga caqabadahaan ayaa u oggolaaneysa ciyaartoydu inay helaan lacag cayiman oo ay ugu furan karaan abaalmarinno gaar ah.
Tani waxay tilmamaysaa qaab kale oo loo qaabilo ficilkii lagu soo bandhigay Dagaalkii Adduunka Z ee mahadsanid cusboonaysiintaan cusub ee “Proving Grounds”, laakiin wixii intaa ka dambeeya, Saber Interactive waxay shaaca ka qaadaysaa qorshayaasha ay u hayaan xilli-sannadeedka labaad ee maaddada. Sidii ay horay u soo mareen, Dagaalkii Adduunka Z wuxuu heli doonaa khariidado cusub iyo hubs. Tani waa wax iska cad, laakiin waxaa lagama maarmaan ah in horay loo sii socdo si dadka adeegsada ay fikrad uga helaan waxa iyaga ku saabsan.
Laakiin wali waa goor hore in la helo xog la taaban karo, iyada oo ay ku hadhay ballantaas oo keliya in waxyaabaha bulshada ay codsadeen ay imaan doonaan. Waxaan ka hadlaynaa Hab Horde, Kaasoo aan wax tafaasiil ah bixin laakiin la xaqiijiyey, wuxuu imaan doonaa xilli-labaad. Sidan, Sabre Interactive iyo Focus Home Interactive waxay rabaan inay sii dheereystaan ​​guusha Dagaalkii Adduunka Z, iyagoo ballanqaaday in soo jeedintooda ay gaarsiin doonaan waxyaabo badan, oo ay ku jiraan xulashooyinka ay ka sheegteen bulshada.
Dagaalkii Adduunka Z waxaa laga heli karaa labadaba Xbox One iyo Playstation 4 iyo PC.